यसको सामग्री अपराध विषयको, नियम, वास्तविक र शारीरिक रूपमा। कार्य को भाग रूपमा निर्दिष्ट, यो सही सेटिङ विषय हो। कार्य को संरचना को वर्गीकरण त्रुटिहरू बच्न अपराध विषयको कडाई परिभाषित थियो आवश्यकता छ। उदाहरणका लागि, को गैरकानूनी प्रयोगको लागि दायित्व सही आधार स्थापना मा कठिनाइ हुन सक्छ , एक व्यापार चिह्न तपाईं यसलाई के प्रतिनिधित्व को ज्ञान छैन भने।
एक वा अपराध अन्य टुक्रा यो वा त्यो सुविधा छ। यसबाहेक, यी मतभेद तर, कानूनी परिणाम मा प्रभाव पार्न धेरै सजिलै देखिने हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, समुद्र माछा अवैध माछा मार्ने एक पर्यावरण अपराध हो। माछा निजी तालाब मा अवैध पक्रेको छ भने, सम्पत्ति अधिकार त्यहाँ उल्लङ्घन छन्। माछा, पहिलो मामला मा अपराधको को विषय रूपमा प्राकृतिक वस्तु हो। दोस्रो मामला मा यो एक छ निजी सम्पत्ति।
आपराधिक कार्य को विषयमा योग्यता, तर पनि कार्य को खतरा को डिग्री मा मात्र होइन एक प्रभाव हुन सक्छ। यो सजाय को individualization मा समावेश गरिएको छ।
यसलाई स्पष्ट विषय, साधनहरुलाई वा अपराध को साधन बीच फरक बुझ्न आवश्यक छ। बन्दूक जसद्वारा को जोखिम वस्तु मा गरिन्छ एक हो। यसलाई सधैं कर्पस को चिन्ह रूपमा संकेत हालतमा छ। उदाहरणका लागि, कहिलेकाहीं यो एक आपराधिक ठेस समावेश गर्दैन - हत्या। हुनत, नियम, हत्या विशिष्ट उपकरण को मद्दतले गरेको छ।
त्यसैले, अपराध विषयको जो प्रवक्ता र एक को individualized समर्थन वा अर्को रूपमा कार्य वित्तीय शिक्षा, छ सामाजिक मूल्य र कार्य को अभिमुखीकरण निर्धारण गर्छ। यसको गुण हो, साथै वस्तु प्रेरित विशेषताहरु inflicted नोक्सानी को प्रकृति मा एक प्रभाव छ। नतिजा सामान्यतया विषय र प्रकृति निर्भर छन् अपराध को वस्तु। उदाहरणका लागि, जब मानव शरीर उजागर, यो धेरै प्राकृतिक स्वास्थ्य, विनाश, दुखाइ र अन्य यस्तै परिवर्तन गर्न हानि बारे कुरा हो।
मानिस एक प्राणी, मात्र शारीरिक तर पनि मानसिक, psyche यो पनि एक अपराध विषय रूपमा कार्य गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई दिइएको। त्यसैले, यस्तो सजग volitional कार्यहरु को दमन रूपमा उनको सम्भावित प्रभाव को प्रभाव अन्तर्गत के वा कुनै पनि कार्य वा अन्य लिइरहेको नगर्न गर्न गर्न आवेग।
सामग्री आपत्ति र वस्तु प्रकृति (शक्ति हालतमा वा विधि) प्रभाव जो आफ्नो (वस्तु वा वस्तु) मा परिवर्तन हुन सक्छ निर्धारण गर्न सक्षम छ। उदाहरणका लागि, तपाईं मानसिक सामान्य वयस्क, तपाईं एक पैदल लागि उहाँलाई बाहिर पठाउन भने, यो मिसिन तल ल्याउन हुनेछ आशा मार्न सक्दैन। यस मामला मा, अवधारणा को likelihood धेरै कम। वास्तवमा, नतिजा कुनै पनि शक्तिहरू वा मृतक को कार्य को परिणाम हुन सक्छ। यस मामला मा, स्थिति परिवर्तन हुन सक्छ। यसलाई सिकार मानसिक बिरामी भएको कल्पित छ भने सम्भावना बढेको हुन सक्छ, र उहाँलाई अघि त्यहाँ झुकाव थियो ध्यान छैन ट्राफिक गर्न।
मा पनि ठेस, सुविधा, उपकरण र वस्तुहरु, विषय रूपमा यस्तो कुरा सहित बाहेक। यो सबै व्यक्तिगत गुण पूरै विधान र सैद्धान्तिक constructs छैन प्रतिबिम्बित हुन सक्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। को संकेत - तर, सही को रूपरेखा मा offender सबैभन्दा विशिष्ट विशेषताहरु निर्धारण गर्न को perpetrator को। तिनीहरूलाई को न्यूनतम सेट अभियोजन लागि आवश्यक छ। अर्को शब्दमा, यो विषय को लक्षण कम्तिमा एक हराइरहेको छ, र त्यसपछि ठेस अनुपस्थित हुनेछ भने।
माछा को विज्ञान - ichthyology
सामाजिक असमानता र यसको कारण
अचम्मको मानव आँखा: संरचना र समारोह
फैशन रुझान 2013 - हरियो स्कर्ट लगाउन के
सामाजिक पर्यटन - सबै को लागि बिदा
बैग छिटो नुनीन बनान खीरे
Nebulizer - यो के हो? के nebulizer चयन गर्न राम्रो छ?
काम अवस्था र ज्याला देखि कर्मचारी "कुरियर एक्सप्रेस सेवा" प्रतिक्रिया